Tag: hafainganan'ny tranonkala | Martech Zone
Fotoana famakiana: 4 minitra Na dia mitantana ny fisoratana anarana amin'ny sehatra amin'ny registrar domain ianao, tsy hevitra tsara foana ny mitantana ny toerana sy ny fomba hamahana ny fidirana DNS hafa rehetra hamahana ny mailaka, ny subdomain, ny host, sns. dia mivarotra domains, tsy manome antoka fa afaka mamaha haingana ny sehatra misy anao, mitantana mora ary manana fihenam-bidy. Inona ny fitantanana DNS? Ny DNS Management dia sehatra mifehy ny mpizara Domain Name System
Fotoana famakiana: 2 minitra Nanoratra, tamin'ny lafiny lehibe, ny fiantraikan'ny hafainganam-pandehan'ireo toetran'ny mpampiasa anao izahay. Ary, mazava ho azy, raha misy fiatraikany amin'ny fitondran-tenan'ny mpampiasa dia misy fiatraikany amin'ny fanatsarana ny motera fikarohana. Ny ankamaroan'ny olona dia tsy mahatsapa ny isan'ny anton-javatra tafiditra amin'ny dingan-dahatsoratra tsotra amin'ny fanoratana amin'ny pejin-tranonkala sy ny fananana izany pejy izany ho anao. Ankehitriny ny antsasaky ny saika ny fivezivezena amin'ny tranonkala dia finday avokoa, tsy maintsy atao ihany koa ny maivana, tena haingana
Alakamisy, Septambra 13, 2018 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Fotoana famakiana: 3 minitra Isaky ny milazalaza ny laharan'ny mpanjifako aho dia mampiasa ny fampitahana amin'ny hazakaza-sambo izay Google no ranomasina ary sambo hafa daholo ny mpifaninana aminao. Misy sambo lehibe kokoa sy tsara kokoa, misy tranainy ary zara raha mipetraka. Mandritra izany fotoana izany, mihetsika ihany koa ny ranomasina… miaraka amin'ny tafio-drivotra (fanovana algorithm), onja (trangam-pitokisana sy lavaka fitadiavana), ary mazava ho azy ny lazan'ny atiny anao manokana. Matetika misy fotoana ahafahako mamantatra
Maninona ianao no tokony hampiasa fanamafisana sary
Talata, Jona 19, 2018 Asabotsy, Jona 23, 2018 Douglas Karr
Fotoana famakiana: 2 minitra Rehefa mamoaka ny sary farany ny mpamorona sary sy mpaka sary, dia mazàna izy ireo tsy nohamarinina hampihenana ny haben'ny rakitra. Niresaka tamin'i Caleb Lane, consultant momba ny fiarovana sy fanatsarana WordPress aho, ary tsikariny fa lehibe ny haben'ny sary ao amin'ny tranonkalantsika (ho fanampin'ny olana maro hafa izay hanampiany anay hanatsara). Misaotra an'i Erik Deckers tamin'ny fanolorana! Ny fananana sary lehibe dia tsy midika hoe mila manana haben'ny sary lehibe ianao.
Fotoana famakiana: 3 minitra Ny tranokala miadana dia misy fiantraikany amin'ny tahan'ny famoahana, ny tahan'ny fiovam-po, ary na ny laharan'ny motera fikarohana anao aza. Izany dia nilaza fa gaga aho amin'ny isan'ny tranonkala mbola miadana be. Nasehon'i Adam ahy tranokala androany nampiantranoina tao amin'ny GoDaddy izay naharitra mihoatra ny 10 segondra ny entana. Mihevitra ity olona mahantra ity fa manangona vola mivady amin'ny fampiantranoana… fa very vola aman-taonina maro satria mandoa vola ny mpanjifa ho avy. Nihalehibe ny mpamaky anay